သံဝါယာကြိုးသံလက်သည်းစက်ရုံ - China Iron Wire Nails ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Road Holland ဝါယာကြိုးကွက် 50mm ...
သံလက်ရာမပါတင့်တယ်သောအထောက်အပံ့ M ...
PVC Coated ကျောက်ပုစွန်ပိုက်ကွန် ...
Hardware Cloth Hot Dip Galv ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအတွင်းရှိအဆင့်အားလုံးတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးနှင့်စံပြ ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းကိုကိုယ်စားပြုသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနုပညာပစ္စည်းကိရိယာ၊ အတွေ့အကြုံများစွာ၊ သိပ္ပံနည်းကျအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အဖွဲ့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးချမှုအတွက်ပြည့်စုံသောဝါယာကြိုးကွက်များကိုဖြေရှင်းပေးသည်။
မြင့်မားသောအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Ring Lock Scaffolding System
အလွှာမြင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျင်မြန်သောအသေးစိတ်လက်စွပ်သော့ခတ်စနစ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ အခမဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ထောက်ခံမှုစိတ်ကြိုက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားဆောက်လုပ်ရေးစနစ်လျှောက်လွှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးပစ္စည်းများ Q235, Q355B, S355 Project Solution ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ 3D ပုံစံဒီဇိုင်း၊ စီမံကိန်းများအတွက်စုစုပေါင်းဖြေရှင်းချက် Standard EN74 / BS1139 / AS1576 MOQ ၂၅ မက်ထရစ်တန်ထုပ်ပိုးထားသောအိတ် + သံမဏိ Pallet အာမခံချက် ၂ နှစ်အကျိုးကျေးဇူး စိတ်ချရသော ...
အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူ Ringlock ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
လျင်မြန်သောအသေးစိတ်လက်စွပ်သော့ခတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစနစ်သည်ထူထဲသောသံမဏိပိုက်၏မြင့်မားသောအားကောင်းသောဂဟေကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောစံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာဖြစ်ပြီးလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတည်ဆောက်နိုင်သည်။ အမျိုးအစားဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အအုံ / ဆိုက် / အပင်များအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအတွက်လက်ဝှေ့ယမ်းစနစ် Q235, Q345, SS400 သံမဏိသုံးစွဲမှုယူနစ်ပမာဏကုဗမီတာ ၁၀၀၀၀၀ - တန် ၈၀၀ (အိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း) Standard EN74 / BS1139 / AS157 ...
၄.၈ မီလီမီတာ / ၈၀ မီလီမီတာသံကြိုးကြိုး၊ ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိသွပ်သွင်းထားသောလက်သည်းများ
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိ Q195 အမျိုးအစား - လျှပ်ကူး / သံဖြင့်သွပ်သွင်းထားသောသံမဏိသံ Dia: ၄.၀ မီလီမီတာအလျား - ၄ ''၊ ၁၀၀ မီလီမီတာအသွင်အပြင် - ချွေတာ၊ အလယ်အလတ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးဖောက်သည်ပြုလုပ်သည် - လက်ခံထားသောမြင့်မားသောအလင်း - သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွန်ကရစ်လက်သည်း၊ သံမဏိလက်စွပ်တို လက်သည်းများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ၄.၈ မီလီမီတာ / ၈၀ မီလီမီတာအများအားဖြင့်လက်သည်းများသွပ်သွင်းခြင်းအကျဉ်းချုပ်နိဒါန်း - အသုံးပြုခြင်းအဓိကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပရိဘောဂများ။ ပစ္စည်း: Q195or235 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Countersunk, Checkeredhead, DiamondP ...
ပူပြင်းသောသွပ်ရှိသောဘဲဥပုံခုံမင်သံမဏိ Twist Shanks လက်သည်း 13 Gauge
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း: Q195 သို့မဟုတ်သံမဏိကြိုးသွပ်အမျိုးအစား: အပူဖြင့်သွပ်ရည်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သွပ်ရည်အရောင်ဆေးသုတ်ခြင်း - NO အရှည် - ၄″ ဝါယာကြိုးအချင်း: ၄ မီလီမီတာစက်ရုံ - ဟုတ်သည်အမြင့်အလင်း - သာမန်ဝါယာကြိုးလက်သည်းများ၊ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွန်ကရစ်လက်သည်းသံမဏိသံမဏိသံမဏိလက်သည်း ၁၃ Twist Shank With Gauge အမြန်အသေးစိတ် - Cnow သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဘဲဥပုံဝါယာကြိုးများကိုကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အဆောက်အ ဦး အလှဆင်ခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဲဥပုံလက်သည်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ...
Round Head Head မှသံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံကြိုးအစည် ၂ - 3/8 "x 113
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း: Q195 သို့မဟုတ်သံမဏိကြိုး galvanized အမျိုးအစား: ပူပြင်းစွာသွပ်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်အရောင်ခြယ်ထား: အဝါရောင်အရှည်: 5″ ဝါယာကြိုးအချင်း: 4MM စက်ရုံ: ဟုတ်ကဲ့အမြင့်အလင်း: ဘုံဝါယာကြိုးလက်သည်း, သွပ်ရည်စိမ်ကွန်ကရစ်လက်သည်းပတ်ပတ်လည် ဦး ခေါင်းဘုံဝါယာကြိုးလက်သည်း Hot Galvanized Coil Ring Shanks2- 3/8 "x 113 Quick Detail: ပြားချပ်ချပ် / ခုံးကွိုင်တိုတိုအမျိုးအစားများ: ချောချောမွေ့မွေ့၊ ဝက်အူ၊ Ring Coating: Electric Galv, Mech Galv, Hot Dipped Galv အရွယ်အစား: ၂.၁ မီလီမီတာအချင်းမှ ၃ ...
အဆောက်အ ဦး ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ချောချောမွေ့မွေ့ Shank သွပ်ရည်စိမ်ကွန်ကရစ်လက်သည်း9Gauge4''
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း: Q195 သို့မဟုတ်သံမဏိကြိုးသွပ်အမျိုးအစား: အပူဖြင့်သွပ်ထားသောသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သွပ်ရည်အရောင်ဆေးသုတ်ခြင်း - NO အရှည် - ၆″ ဝါယာကြိုးအချင်း: ၄.၅ မီလီမီတာစက်ရုံ: ဟုတ်သည်။ အလင်းရောင် - သာမာန်ဝါယာကြိုးလက်သည်း၊ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွန်ကရစ်လက်သည်းချောမွေ့စွာသွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကွန်ကရစ်လက်သည်း ၉ Gauge4'' ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်: ချောချောမွေ့မွေ့ဘုံဝါယာကြိုးလက်သည်း ၉ gauge ဝါယာကြိုးအချင်းနှင့်4"အရှည် 1 ပေါင်အလေးချိန်ဖော်ပြချက်: 1. အသုံးပြုမှု: Mainlyforbuildingconstructi ...
12 gauge ခေါင်မိုးသံဝါယာကြိုးလက်သည်း / အဖြစ်များသောသွပ်ရည်စိမ်လက်စွပ် Shank လက်သည်း
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း: Q195 သို့မဟုတ်သံမဏိဝါယာကြိုးအမျိုးအစား - အပူဖြင့်သွပ်ထားသောသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သွပ်ရည်အရောင်ဆေးသုတ်ခြင်း - NO အရှည် - ၄″ ဝါယာကြိုးအချင်း: ၄ မီလီမီတာစက်ရုံ - အမြင့်အလင်း - သာမာန်ဝါယာကြိုးလက်သည်းများ၊ သံမဏိလက်စွပ်တိုချောင်းလက်သည်းများ 12 Gauge Common Wire Nails , 1 1/4 "လက်စွပ် Shank သွပ်အမိုးလှီးခြင်းလက်သည်းလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်: SpecsModel: 1/2", 3/4 ", 7/8", 1 ", 1-1 / 8", 1-1 /4", 1- 1/2 ", 1-3 / 4",2", 2-1 / 2", 2-3 /4", 3" ...
သစ်သားအတွက် 10mm ကာဗွန်အနိမ့်ကာဗွန်ပွတ်ဘုံသံဝါယာကြိုးလက်သည်း
အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်း: Q195 သို့မဟုတ်သံမဏိကြိုးသွပ်အမျိုးအစား: အပူဖြင့်သွပ်ထားသောသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သွပ်ရည်အရောင်ဆေးသုတ်ခြင်း - NO အရှည် - 5″ ဝါယာကြိုးအချင်း: ၅ မီလီမီတာစက်ရုံ - အမြင့်အလင်း - သာမန်ဝါယာကြိုးလက်သည်းများ၊ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွန်ကရစ်လက်သည်း ၁၀ မီလီမီတာအနိမ့်ကာဗွန်ပွတ်ဘုံဝါယာကြိုးလက်သည်း Wood for Flat Head: ၁။ ပစ္စည်း - အရည်အသွေးနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိ Q195, Q2152 ။ အပြီးသတ်: ကောင်းမွန်သောပွတ်, ပြားချပ်ချပ်ခေါင်း, စိန်ပွိုင့်, ပူပြင်း galvanized / electro-galvanized, ချောမွေ့, shank.3 ။ T ...
Ring Shank သံဝါယာကြိုးလက်သည်း၊ ဘုံသုံးသောသံမဏိသံမဏိကွန်ကရစ်လက်သည်းများ
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း: Q195 သို့မဟုတ်သံမဏိကြိုးသွပ်အမျိုးအစား: အပူဖြင့်သွပ်ရည်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သွပ်အကာသုတ်ဆေးသုတ်ခြင်း - NO အရှည် - ၄″ ဝါယာကြိုးအချင်း: ၅ မီလီမီတာစက်ရုံ - အမြင့်အလင်း - သာမာန်ဝါယာကြိုးလက်သည်းများ၊ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွန်ကရစ်လက်သည်းသံမဏိသံမဏိ Common Wire Nails ကွန်ကရစ်လက်စွပ် Shanks 4.8mm x 80mm လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်: လက်သည်းအရွယ်အစား: အရှည် 10mm မှ 600mm, အချင်း 1.9 to 6.0mm လက်သည်းခေါင်း: ဘဲဥပုံ၊ ခေါင်းဖြူ၊ ပြားချပ်ချပ် Finish: Polished, galvanized, hot dip galvanized Shanks: smooth, ...